Yehlulekile ukubuyekeza iPacman 4: solution | Kusuka kuLinux
Onjiniyela be I-Arch Linux umemezele ngokusemthethweni ukufakwa kwe I-Pacman 4 ngokugcwele ekusatshalalisweni nasendaweni yalo eyisisekelo, okubizwa ngokuthi yi-core, okuthile okuvelele ikakhulukazi i kusayiniwe ukusekelwa kwamaphakeji ezinikezela ngeziqinisekiso eziningi kubasebenzisi ngemvelaphi yabo nokusebenza kwazo kwangempela (ngaphandle kwezici zokuphepha).
Noma kunjalo, abaningi bethu babekwenzile lokho izinkinga ukuze buyekeza uhlelo lwethu ngemuva kwalolu shintsho. Nazi izixazululo ...
Lapho usebenzisa umyalo wokuvuselela uhlelo:
:: Amaphakeji alandelayo kufanele abuyekezwe kuqala:
:: Ingabe ufuna ukukhansela ukusebenza kwamanje
:: bese uvuselela lawa maphakeji manje? [Y / n]
Lapho wamukela, kuvela okufana nalokhu:
ukuxazulula ukuncika ...
kubhekwa izingxabano ...
iphutha: iphutha lokuthengiselana (alikwazanga ukwanelisa ukuncika)
:: umbuzo-wephakheji: udinga i-pacman <3.6
Iphutha livela ngenxa yenkinga yokuncika kwephakeji (kulokhu umbuzo-wephakheji). Isixazululo ukususa iphakethe eliphikisanayo nakho konke ukuncika kwalo ohlelweni.
pacman -Rsc umbuzo-wephakheji
Okuya ngamaphakeji alandelayo:
ngibheka ukuncika ...
(3) izosuswa: yaourt-0.10.2-1 [0,22 MB] umbuzo-package-0.9-1 [0,07 MB] yajl-2.0.4-1 [0,22 MB] Usayizi ophelele ususiwe: 0,52 , XNUMX MB
Ngabe ufuna ukususa lawa mapakeji? [Y / n]
Bese ubuyekeza i-pacman:
Sawubona! Wagcina kuphi uYaourt?
1 Shintsha ifayela lokumiswa kwePacman
2 Nika amandla okhiye be-PGP
Shintsha ifayela lokumiswa kwePacman
Lapho ufaka iPacman 4, isixwayisa ngokwakhiwa kwefayela lokumisa elisha ku-pacman.conf.pacnew.
Ukuphela kokufanele ukwenze ukufaka esikhundleni sefayili lokumisa elisetshenziswayo manje nalena entsha. Ukuze wenze lokhu, qala ngokwenza isipele esidala nge:
Bese uqamba kabusha ifayela elisha:
Ekugcineni, ngavula ifayela:
… Futhi engeza izinqolobane ezingekho emthethweni obukade unayo kwi-pacman.conf yakudala (njengaleyo esetiyanini, ngokwesibonelo). Indlela elula kunamathisela okulandelayo ekugcineni kwefayela:
[archlinuxfr] Iseva = http://repo.archlinux.fr/$arch
Lesi yisikhathi sokufaka kabusha amaphakheji esiwasusile esigabeni esedlule (i-yaourt, umbuzo wephakeji, njll.).
I-pacman -S umbuzo wephakheji-yeourt
Nika amandla okhiye be-PGP
I-Pacman 4 inezinto ezintsha zokukwazi ukudinga amafayela asayiniwe (i-PGP). Ngemuva kokuyifaka, ikukhumbuza ngesixwayiso esilandelayo: «>>> Run` pacman-key –init` ukusetha ukhiye wakho we-pacman.»
Ngivule ifayela lokumisa elisha /etc/pacman.conf:
Thola ulayini "SigLevel = Ongakukhetha UkuthenjwaOnly" bese uyayiyeka. Bese uphawule ngomugqa othi "SigLevel = Ungalokothi".
Kufanele kubukeke kanjena:
# Ukuhlolwa kwesiginesha ye-PGP
# QAPHELA: Akukho kulokhu okuzosebenza ngaphandle kokusebenzisa i- `pacman-key --init kuqala.
# Okuhlanganiswe ngokuzenzakalela kulingana nomugqa olandelayo. Lokhu kudinga
# wena ukuze usayine futhi uthembe okhiye bephakeji usebenzisa `ukhiye we-pacman` ukuze babe
# kuthathwa njengokuvumelekile.
SigLevel = Ngokuzithandela OthenjwayoOnly
# Uma ufisa ukubheka amasiginesha kepha ugweme izingqinamba zezimpawu zasendaweni nokwethemba, sebenzisa
# umugqa olandelayo. Lokhu kuzophatha noma yimuphi ukhiye ongeniswe kukhiye we-pacman njengo
#SigLevel = Ngokuzithandela TrustAll
# Okwamanje, cisha ngokuzenzakalela ngaphandle kokuthi ufunde okungenhla.
#SigLevel = Angikaze
Ungakhohlwa ukungahambisani nolayini be-SigLevel ezinqolobaneni. Kufanele kubukeke kanjena:
[umnyombo] SigLevel = Iphakheji Iyadingeka
[okungeziwe] SigLevel = PackageOptional
[umphakathi] SigLevel = IphakhejiOptional
Gcina izinguquko bese uvala ifayela.
Manje, qala okhiye be-PGP ngo:
ukhiye we-pacman --init
Njengoba kunconyiwe ku-Arch wiki, isinyathelo esinconyiwe ukuguqula ifayela lokumiswa kwezikhiye ze-PGP ukugwema izinkinga lapho uzingenisa:
Miselela ulayini "keyerver hkp: //keys.gnupg.net" nge "keyerver hkp: //pgp.mit.edu" (ngaphandle kwezilinganiso).
Ekugcineni, udinga kuphela ukulanda okhiye. Ukugwema ukulanda i-1 by 1 ku-wiki, bancoma iskripthi esilandelayo ukulanda okhiye abakhulu:
ngokhiye ku-FFF979E7 CDFD6BB0 4C7EA887 6AC6A4C2 824B18E8; yenza
pacman-key --recv-keys $ ukhiye
pacman-key --lsign-key $ ukhiye
phrinta 'trustn3nquitn' | gpg --homedir /etc/pacman.d/gnupg/
--no-permission-warning --command-fd 0 --eded-key $ ukhiye
yigcine njengombhalo we-bash (ngifaka i-master-keys.sh kuyo) ngiyinikeze izimvume (Sudo chmod + x master-keys.sh) bese ngiyisebenzisa kusuka ku-terminal (./master-keys.sh).
Ekugcineni, buyekeza uhlelo:
Uma uma ubuyekeza uthola iphutha elilandelayo: "uhlelo lwefayela: / njll / mtab lukhona ohlelweni lwefayela", kumane nje kudingekile ukuphoqa ukufakwa kwenguqulo entsha yephakeji, okuyi-fileystem-2011.12-2:
uhlelo lwefayela le-pacman -S --force
Usuxwayisiwe vele: kungenzeka kakhulu ukuthi lapho izibuyekezo zifakwa, kuvele izimpawu eziningi ezithi "ukhiye wephakheji X awaziwa, ingabe ufuna ukuwungenisa?" Vele ushaye u- "S" kaningana ize iphele leyo milayezo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Iphutha ukubuyekeza iPacman 4: isixazululo
Kuphela manje ingibuze ukuthi ngiyifaka kanjani yonke into futhi. (Landa kuphela)
noma: gmtk: ukhiye "A91764759326B440" awaziwa
:: Ngenisa ukhiye we-PGP 9326B440, «Lukas Fleischer«, wadala ngo-2011-10-12? [Y / n] Y
iphutha: ama-inetutils: ukhiye "FCF2CB179205AC90" awaziwa
Kuhle??? noma kukhona okungahambanga kahle ???
Kuhle lokho! Ngiyajabula. 🙂
Ngikwenzile lokho futhi yonke i-pacman.conf yalimala, ayingivumeli ukuthi ngivuselele noma ngiyifake, ingiphonsa kulo mlayezo ...
impande @ dmaziado-3m3r dmaziado3m3r] # pacman -Syy
iphutha: ifayela lokumiswa /etc/pacman.conf, umugqa 1: Zonke izinkomba kufanele zibe zesigaba.
Ngicabanga ukuthi iphutha kwaba ukuthi ngokufaka i-yawtthi ngabuyisa izinkuni ku-pacman.conf yami, ngenzenjani ???
Kwenzekani konjiniyela abaphelelwa i-ritalin?
Benza isichitho yonke indawo!
I-Wikipedia: ukuvikela inkululeko